ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တပ်မတော်ဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်းများ ကောက်နုတ်ချက် How do I apply payday loan Your Finances are your own Business
ပင်မနေရာ မူဝါဒ/ဥပဒေ တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တပ်မတော်ဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်းများ ကောက်နုတ်ချက် ပင်မနေရာ ကလောင်ရှင် အထူးသတင်း ကြားဖြတ်သတင်း မူဝါဒ/ဥပဒေဥပဒေ မူဝါဒ အမိန့် ကြေညာချက် သုတေသန တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး VOA အသံလွှင့်ချက် DVB အသံလွှင့်ချက် စစ်ရာဇ၀တ်မှု စစ်အင်အားဇာခန်းဆီးနောက်ကွယ်မှ ဇာတ်လမ်း သင်္ခါရတရားနှင့်စစ်အာဏာရှင် စစ်အာဏာရှင်ကြီး၏အတွင်းရေး စစ်အင်အား ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံများ စစ်ယာဉ်များ အထူးကဏ္ဍကလေးစစ်သား စစ်သားအခွင့်အရေး အဂတိလိုက်စားမှု ပြည်တွင်းသင်တန်း ပြည်ပသင်တန်း သွေးစကားဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်တွေ့ တိုက်ပွဲ တပ်တွင်းဆင်းရဲကျပ်တည်းမှု အိတ်ဖွင့်ပေးစာ Skip to content
ပင်မနေရာ မူဝါဒ/ဥပဒေ တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တပ်မတော်ဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်းများ ကောက်နုတ်ချက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တပ်မတော်ဆိုင်ရာ မိန့်ခွန်းများ ကောက်နုတ်ချက် Friday, 11 May 2012 11:41	မူဝါဒ/ဥပဒေ	- တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး User Rating: / 3
PoorBest ???????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ???????? တပ်မတော်ဟာ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ
လူ့ဘောင်သစ်ပါတီရုံး အနော်ရထာလမ်းတွင် ၁၀-၇-၈၉ နေ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
အယ်ဒီတာအဖွဲ့ တင်ပြချက်။ ။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ဦးနေဝင်းဓါတ်ပုံအား ရုံးဌာနများတွင် ဆက်လက်ကိုးကွယ်ကာ တင်နေသည်ကို သဘာဝမကျကြောင်း မိန့်ခွန်းတစ်ခုတွင် ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ စောင့်ကြည့်လေ့လာနေသည့် ထိုစဉ်က တရားမဝင် အာဏာသိမ်းလိုက်သော ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသည် ၁၉၉၂ ခုနှစ် ကာလပိုင်းတွင် တပ်မတော်နှင့် ရုံးဌာနများအတွင်း ဦးနေဝင်းဓါတ်ပုံသာမက ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းဓါတ်ပုံကိုပါ အားလုံးဖြုတ်ခိုင်းခဲ့ကြောင်း သိမှီလိုက်သူ အရာရှိများက တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မဆလပါတီ ညီလာခံတစ်ခုတွင် ဦးနေဝင်းအား တပ်မတော်ဖခင်ဟု လက်အောက်အရာရှိများက အမွှန်းတင်လိုက်သဖြင့် လိပ်ပြာမသန့်သော ဦးနေဝင်းအနေဖြင့် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကို ဖခင်အစစ်အဖြစ် တန်ဖိုးထား သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီး သူ့ကို တပ်မတော်ရဲ့ မွေးစားဖခင်လို့ ခေါ်နိုင်ကြောင်းကို ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားခဲ့ဖူးပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် သူမ၏ဖခင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည့် တပ်မတော်အပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးမားသလို တပ်မတော်ဖခင် တစ်ဦးတည်းသာရှိကြောင်း အောက်ပါမိန့်ခွန်းတွင် ဟောပြောသွားခဲ့ပါသည်။
အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ တပ်မတော်ကရော နဝတကရော ထပ်တလဲလဲ ပြောနေပါတယ်။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းဟာ တပ်မတော်ရဲ့ဖခင်ပါ။ အဲဒီတော့ အခုကျမတို့ ပြန်ပြီးတော့ စဉ်းစားရမယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်ဆိုလို့ရှိရင် အဖေဆုံးသွားတာ ၄၂ နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလို ၄၂ ပြည့်တဲ့ အခမ်းအနားမတိုင်မှီ ကျမတို့ စဉ်းစားရမယ်။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းဟာ တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်လို့ဆိုလို့ရှိရင် တပ်မတော်ဟာ ဖေဖေလိုချင်တဲ့အတိုင်း လုပ်နေရဲ့လား။ တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ဆိုတဲ့ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း ချမှတ်လိုက်တဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း ဒီတပ်မတော်ဟာ ဆက်ပြီး လုပ်နေရဲ့လားဆိုတာ ကျမတို့ မေးရလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမေးတဲ့ အခါကျမှ ကျမ ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့ ဖေဖေဟာ တပ်မတော်လမ်းမှားသွားမှာ အင်မတန်မှ စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ထပ်တလဲလဲ ပြောခဲ့တယ်။ မင်းတို့လက်ထဲမှာ လက်နက်ရှိလို့ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ရမယ်မထင်နဲ့။ ပြည်သူလူထုကို ခြိမ်းခြောက်တာ၊ နှိပ်စက်တာ၊ ဖမ်းဆီးတာ၊ ဒါတွေ မလုပ်နဲ့ဆိုတာ ထပ်တလဲလဲပြောခဲ့တယ်။ ဒီတပ်မတော်ဟာလည်း လူတစ်ယောက်ထဲအတွက် မဟုတ်ဘူး။ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုအတွက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲ ထပ်တလဲလဲ ပြောခဲ့တယ်။ တပ်မတော် လမ်းမှားသွားမှာကို ဖေဖေ အင်မတန်မှ စိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ဒီလောက်တောင်မှ စိုးရိမ်လျက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လမ်းမှားသွားရသလဲ။
ဦးနေဝင်းဟာ တပ်မတော်ကို လမ်းမှားပေါ် တင်ပေးလိုက်တယ်။ အခု ဒီမှာ တပ်မတော်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ တပ်မတော်သားများ၊ အရာရှိများ စဉ်းစားပါ။ တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ဆိုတာ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းဟာ တပ်မတော်ကို ဘယ်လိုအနေအထား ရှိစေချင်သလဲဆိုတာ ပြန်ပြီးတော့ သုံးသပ်ပါ။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်း တပ်မတော်လား၊ ဗိုလ်နေဝင်း တပ်မတော်လား ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်။ ကျမဒါကို ရှင်းရှင်းပဲပြောပြမယ်။ ခဏခဏ အမျိုးမျိုးပြောနေလို့ အလကားပဲ။ နောက်ဆုံးတော့ ဒီမေးခွန်းပဲ။ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်မယ့် တပ်မတော်လား၊ ဗိုလ်နေဝင်းရဲ့ မဆလ လမ်းစဉ်ကို လိုက်မယ့် တပ်မတော်လား၊ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်မယ့် တပ်မတော်ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူလူထုနဲ့ တသွေးထဲ၊ တသားထဲ ဖြစ်သွားမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့လည်း ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းဟာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဆိုလို့ရှိရင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ လမ်းစဉ်ကို လိုက်ရမယ်။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ လမ်းစဉ်ဟာ ဒီမိုကရေစီ လမ်းစဉ်ပါပဲ။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုအခြေအနေနဲ့ အင်မတန်မှ ဆီလျော်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဖေဖေပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိစ္စနဲနဲ ကျမဖတ်ပြပါမယ်။ ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာဘာလဲ။ ကျမတို့ ဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေ ရသင့်သလဲဆိုတာ သေသေချာချာ ဖေဖေရေးသွားတာ၊ ပြောသွားတာရှိုပါတယ်။
လက်နက်နည်းဆိုတာဟာ ဖက်ဆစ်နည်းဆိုတာ ဖေဖေလည်း ပြောခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ ကျမတို့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၊ လက်နက်မဲ့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများကို နောက်ထပ်ပြီးတော့ လက်နက်နည်းနဲ့ နှိမ်နင်းမယ် ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒီအစိုးရဟာ ဖက်ဆစ်အစိုးရလို့ ကျမတို့ ကြေညာရမှာပဲ။ လက်နက်နည်းနဲ့ နှိမ်နင်းဖို့ မလိုပါဘူး။ တရားဥပဒေနည်းနဲ့ တရားမျှတတဲ့နည်းနဲ့၊ အမှန်တရားနည်းနဲ့ ကျမတို့ ပြည်သူလူထုကို ထိန်းသိမ်းလို့ရပါတယ်။ အရင် ကျမတို့ ပြည်သူလူထုကို လက်နက်နည်းနဲ့ နှိမ်နင်းခဲ့လို့ပဲ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေကို မြင်လို့ရှိရင် ပြည်သူလူထုဟာ စိတ်လှုပ်ရှားတာပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့က စည်းကမ်းရှိရှိ၊ အေးအေးချမ်းချမ်း နေစေချင်တယ် ဆိုလို့ရှိရင် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေကို မြို့ထဲကနေပြီးတော့ ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါ။ ကျမတို့အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ ဒီလို လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကို ရုတ်သိမ်းလိုက်လို့ရှိရင် စည်းကမ်းရှိရှိ၊ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေနိုင်တယ်ဆိုတာ ပြောရဲတယ်။
နောက်ပြီးတော့လည်း နဝတကို ပြောချင်တယ်။ တပ်မတော်သားများကို ဒီလောက် မနှိပ်စက်နေပါနဲ့။ ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒီလောက်တောင်မှ လှည့်ပြီး လုပ်နေရတာ။ ရှေ့တန်းမှာလည်း တိုက်ရသေးတယ်။ မြို့ထဲမှာလည်း တခါထဲကားကြီးတွေနဲ့ လှည့်နေရသေးတယ်ဆိုတာ ဒါလည်း မသင့်တော်ပါဘူး။ တပ်မတော်သားများ တပ်ထဲပြန်ပြီး နားကြပါစေ။ ကျမတို့ ပြည်သူလူထုဟာ ကိုယ့်စည်းကမ်းကို ကိုယ်ထိန်းပါ့မယ်။ ကျမတို့ဟာ ကိုယ့်စည်းကမ်းကို ကိုယ်ထိန်းနိုင်တဲ့ ပြည်သူလူထု ဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့နိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲနေပါတယ်။ တီအီး - 11 ကားတစ်စင်း မြို့တပတ် ပတ်လို့ရှိရင် ဓာတ်ဆီ ဘယ်လောက်ကုန်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဓာတ်ဆီလည်း ကုန်တယ်။ ရဲဘော်တွေလည်း ပင်ပန်းတယ်။ ပြည်သူလူထုလည်း ခြောက်ခြားတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ဒါမလုပ်သင့်၊ မလုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ နဝတဟာ ဘာကိုကြောက်နေလို့ ဒီလောက်တောင်မှ ရဲဘော်တွေကို မြို့ကို လှည့်ခိုင်းနေတာလဲ။ ကြောက်စရာ မလိုပါဘူးဆိုတာ ကျမပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျမတို့ရဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ မှန်မှန်ကန်ကန် စည်းကမ်းရှိရှိ လုပ်သွားမှာပါ။ စိုးရိမ်စရာ ရှိလို့ရှိရင်၊ ကြောက်စရာ ရှိလုိ့ရှိရင် ကျမတို့နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။ တိုင်ပင်ပါ။ အဖြေရှာပါ့မယ်။
ကျမတို့လည်း ပုထုဇဉ်တွေပဲ။ ကျမတို့ ဖက်ကလည်း၊ ပြည်သူလူထုဖက်ကလည်း ကြောက်တဲ့ ကိစ္စတွေရှိတာပေါ့။ စိုးရိမ်တဲ့ ကိစ္စတွေရှိတာပေါ့။ မကျေနပ်တဲ့ ကိစ္စတွေရှိတာပေါ့။ ဒီကိစ္စတွေကို ညှိနှိုင်း၊ ဆွေးနွေး၊ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ပြေလည်အောင် လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကျမတို့ နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမလဲ။ နဝတအတွက်ကော ဘယ်လောက် ဂုဏ်သိက္ခာရှိမလဲ။ အခုဆိုလို့ရှိရင် ကျမ မြင်သလောက်တော့ နဝတဖက်ကနေပြီးတော့ အမှားရှိပါတယ်လို့ ဝန်ခံရမှာ မျက်နှာပျက်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် လူကြီးများအနေနဲ့ အာဏာရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ မှားတာကို မှားတယ်လို့ မဝန်ခံရဲတဲ့ သတ္တိမျိုးဟာ ဘာသတ္တိမျိုးလဲ။ နောက်ဆုံးကျတော့ သတ္တိဆိုတာဟာ အမှန်တရားကို ရင်ဆိုင်ရဲတာပဲ။ အမှန်တရားအတွက် ဘာမဆို ရင်ဆိုင်ရဲရမယ်။ ဒါဟာမှ တကယ့် သတ္တိပဲ။
ဒီတော့ ကျမတို့နိုင်ငံမှာ အခု ပြတ်ပြတ်သားသား နားလည်ရမယ်။ (၂၆) နှစ်အတွင်း မဆလ စနစ်ကို ထူထောင်ခဲ့တာ ဦးနေဝင်း။ တပ်မတော်ကို လမ်းမှားပေါ်တင်ခဲ့တာ ဦးနေဝင်း။ တပ်မတော်ဖက်ကလည်း ဒါကို သေသေချာချာ နားလည်ဖို့ အချိန်ရောက်လာပြီ။ တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင်ဆိုတာ၊ တဦးတည်းသော ဖခင်ဆိုတာ ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ တပ်မတော်သားများက လက်ခံရမယ်။ ကျမအနေနဲ့ ဒုတိယဖခင်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို လုံးလုံး လက်မခံဘူး။ ဗမာစကားမှာလည်း မရှိပါဘူး။ လူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှတော့ ဖခင်ဆိုတာ တစ်ဦးပဲရှိနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျမတို့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအားလုံး သိပါတယ်။ ဒီတော့ တပ်မတော်ထဲမှာ ဖခင်တစ်ဦးထဲသာ ရှိပါစေ။ ဒီတစ်ဦးတည်းသော ဖခင်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာပါ။ လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် နောင်တပ်မတော် အတွက်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာရှိနိုင်မယ်။ ပြည်သူလူနဲ့ တပ်မတော်ကြားထဲမှာလည်း ညီညွတ်မှုရှိနိုင်မယ်။ ဒီတိုင်းပြည်လည်း တိုးတက်နိုင်မယ်။ ကျမတို့ဟာ မှန်ကန်တဲ့ လမ်းစဉ်ပေါ်မှာ လျှောက်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ ရှိရင် ပြည်သူလူထုနဲ့ အချိန်မရွေး လက်တွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနေဝင်းလမ်းစဉ်အပေါ်မှာ လျှောက်သွားချင်တယ်ဆိုလို့ ရှိရင်တော့ ပြည်သူလူထုနဲ့ လမ်းခွဲရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခု ကျမ ပြောချင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးစောမောင်ဟာ ဦးနေဝင်း အငြိမ်းစားယူ သွားပြီလို့ ပြောပါတယ်။ ဦးနေဝင်း အငြိမ်းစားယူသွားပြီလို့ ပြောလို့ရှိရင် ဘာဖြစ်လို့ အစိုးရရုံးတွေမှာ၊ တရားရုံးတွေမှာ ဦးနေဝင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဆက်ပြီးတော့ ချိတ်ဆွဲထားသလဲဆိုတာ ကျမမေးချင်ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်း ဒါကို ကန့်ကွက်စေချင်ပါတယ်။ အငြိမ်းစားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့ ဦးနေဝင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံကို အစိုးရရုံးများ၊ တရားရုံးများမှာ မချိတ်ပါနဲ့တော့။ ကျမတို့ဟာ ထုံးထမ်းစဉ်လာအရ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုသာ ချိတ်ပါမယ်။ ဒါကတော့ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ချိတ်ချင်လို့ရှိရင် ဗိုလ်ချူပ်မှူးကြီးစောမောင်ရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုတော့ ချိတ်နိုင်ပါတယ်။ ဦးနေဝင်းရဲ့ ဓာတ်ပုံကိုလည်း ဖြုတ်ချပါတော့။ ဦးနေဝင်းရဲ့ အမိန့်အာဏာအောက်ကလည်း လွတ်မြောက်အောင်လို့ တပ်မတော်နဲ့ နဝတဟာ ရုန်းထွက်ပါတော့လို့ ကျမ ဒီကနေ မေတ္တာ ရပ်ခံလိုက်ချင်ပါတယ်။
Last Updated ( Friday, 05 April 2013 00:03 )